Izindaba - Eminye imininingwane emincane okufanele inakwe lapho kugcinwa amabhande ezimboni
Eminye imininingwane emincane okufanele inakwe lapho kugcinwa amabhande ezimboni
I-Ningbo Ramelman Transmission Technology Co., ltd. Njengomkhiqizi oneminyaka eyi-10 yokukhiqiza okwenziwe ngezifiso, i-Ningbo Ramelman Transmission Technology Co., ltd. yathi ngenkathi kwenziwa umkhiqizo wezimboni, amabhande ezimboni kufanele asetshenziswe ngendlela efanele ukufeza umsebenzi wawo omkhulu. Kuyadingeka ukuqonda izici nokuqapha kwamabhande ezimboni. Amabhande ezimboni asetshenziswa kakhulu kwimishini ye-electromechanical, eqhutshwa ngamandla akhiqizwa yizimoto. Izimboni ezisebenza ngokunemba ezijwayelekile njengezinto zasendlini, amakhompyutha, amarobhothi, njll. Zizosetshenziswa ochungechungeni lwebhande lokudlulisa.
Noma kusetshenziswa amabhande ahlukene ezimboni emikhiqizweni ehlukile yemishini, ulwazi lokugcina lwamabhande ezimboni lusadingeka ebhizinisini ukuthi lisebenzise. Ukwazi ukuthi uwagcina kanjani amabhande ezimboni kungandisa impilo yensizakalo yamabhande ezimboni.
Isitoreji sebhande lezimboni
1. Ibhande ne-pulley kufanele kugcinwe kuhlanzekile futhi kungenawo uwoyela namanzi.
2. Lapho ufaka ibhande, hlola uhlelo lokudlulisa, ukuthi ingabe ishafula lokudlulisa liqonde ngqo esondweni lokudlulisa, noma ngabe ishafula lokudlulisa liyafana yini, ukuthi isondo lokudlulisa lisendizeni yini, uma kungenjalo, kufanele lilungiswe.
3. Unganamathisi igrisi noma amanye amakhemikhali ebhande.
4. Ungasebenzisi amathuluzi noma amandla angaphandle ngqo ebhande lapho ufaka ibhande.
5. Ibanga lokushisa elisebenzayo kwebhande lingu -40 ° -120 ° C.
6. Ngesikhathi sokugcina, gwema ukukhubaza ibhande ngenxa yesisindo eseqile, vimbela ukulimala kwemishini, futhi ungagobi noma ukhame kakhulu.
7. Ngesikhathi sokugcina nokuhambisa, gwema ilanga eliqondile noma imvula neqhwa, kugcine kuhlanzekile, futhi uvimbele ukuthintana nezinto ezithinta ikhwalithi yenjoloba, njenge-asidi, i-alikhali, uwoyela namakhemikhali awuketshezi wemvelo.
8. Ithempelesha yokugcina impahla kufanele igcinwe phakathi kuka -15 ~ 40 degrees Celsius ngesikhathi sokugcinwa, futhi umswakama ohlobene kufanele ugcine phakathi kuka-50% no-80%.
Ngoba ukusebenza nezinto zohlobo ngalunye lwamabhande ezimboni kwehlukile, kusenomehluko othile ezindleleni zokugcina kunhlobo ngalunye lwamabhande ezimboni, kepha ahlala efana.
Isikhathi Iposi: Sep-01-2021